Ra'iisal Wasaaraha magacaaban oo booqasho ugu tegay Farmaajo iyo Sheekh Shariif (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ra'iisal Wasaaraha magacaaban oo booqasho ugu tegay Farmaajo iyo Sheekh Shariif (Sawirro) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisal wasaaraha magacaaban ee Xukuumadda Soomaaliya Xamza Cabdi Barre ayaa caawa booqasho ugu tegay madaxweynayaashii hore Shariif Seekh Axmed iyo Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Kulamada ayaa ahaa sallaan iyo kala war qaadasho, waxaana ku wehliyey Ra’iisal wasaaraha xildhibaanno ka tirsan labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka.
Kulanka uu Ra’iisal wasaare Xamza la yeeshay Farmaajo waxaa dhinaca Farmaajo ku wehliyay agaasimeyaashii hore ee Madaxtooyada.
Farmaajo ayaa markii uu horeysay muuqaallo laga soo qaaday intii uu xilka ka degay, kana baxay Villa Somalia, isagoo hadda degan Guri ku dhow Garoonka Diyaaradaha Muqdisho.
Sheekh Shariif ayaa isna waxaa dhinaciisa kulanka uu la yeeshay Ra’iisal wasaaraha magacaaban ku wehliyey xubnaha xisbigiisa
Previous articleHoggaamiyaha Imaaraadka Carabta oo ballanqaad u sameeyay Madaxweyne Xasan Sheekh
Next articleMadaxtooyada Somaliya oo shaacisay Lacag Imaaraadku ugu deeqay iyo Heshiiska Amniga